Zuva: Chivabvu 22, 2020
IETT ichaenderera mberi nekutakura vapfuuri mukati mehoridhe. Pamazuva emabiko ndipo panofanirwa kuchinjirwa nguva, vafambi vanozotakurwa pamitsetse yebhazi maererano nehurongwa hweMugovera Mugovera uye nemamwe mazuva zvichienderana nehurongwa hweSvondo. Zvezvipatara [More ...]
Ankara Metropolitan Municipality yapedza kugadzirira Eid al-Fitr. Ipo mabasa ekuchenesa anoitwa mumakuva pamwe nemigwagwa uye maruva eBaşkent, zvikwata zveDhipatimendi reMapurisa zvinoongorora chikafu kunyanya kumakambani anogadzira maswiti. [More ...]
Zvokufambisa zveruzhinji zvichave sei muA Ankara kwemazuva mana?
Sezvineiwo matanho anofanira kutorwa kurwisa chirwere chekoronavirus (Covid-19), nguva yekumisikidzwa ichaiswa musi wa 23-26 Chivabvu 2020, sekufunga kwesarudzo yeGavhuna weGurukota reA Ankara, HIFZISSIHHA, akanyorwa 21.05.2020 uye akaverengewa 2020/37. [More ...]
Gurukota rinoona nezvekutakura nekuvakiswa kwezvinhu, Adil Karaismailoğlu, akataura kuti masangano ese vakatora matanho akasiyana mukurwisa chirwere cheCovid-19 icho chakatanga muChina, chikaita dambudziko munyika. Kuzvifambisa uye panguva ino [More ...]
Mukati mechikamu chekurwira kukonzeresa kubuda kweiyo coronivirus, mushure mekusvitswa kwaziviswa musi wa 23-24-25-26 Chivabvu, panguva yeRamadan, Metropolitan Municipality akapedza matanho akafanira uye gadziriro. Metropolitan Meya Muhittin Böcek, akarumbidza Ramadan [More ...]
Antalya Metropolitan Meya Muhittin Böcek akaongorora izvo zvisikwa zvemabasa paMeltem Boulevard mukati mechikamu che3rd Stage Rail System Project. Kugamuchira ruzivo nezve iyo irikuenderera mberi mabasa, Mutungamiriri Tupembenene, [More ...]
Kocaeli Metropolitan Municipality Police department zvikwata zvinoshanda nesimba kuona rugare nerunyararo rwevagari munzvimbo zhinji dzeguta. Zvikwata zveMotokari dzeTraffi hazvina kunaka kudzivirira kuyerera kwemotokari mukati medhorobha rose [More ...]
Izmir Metro, iyo inotakura zviuru mazana mashanu emapasiketi pazuva, ine makore makumi maviri
Metro, iro hupenyu hwehupenyu hwekufambisa kwevanhu vese muIzmir, ane makore makumi maviri ekuzvarwa. Iyo system yakavakwa neMetropolitan Municipality inotakura vanhu vanosvika hafu yemiriyoni pazuva neetamu mitsetse. Izmir Metro, yakatanga kushanda May 20, 22 muIzmir, [More ...]
Gebze Darıca Metro Yakagadzirirwa Kuvhura munaGunyana 2023
Mubatanidzwa weMapurovhinzi eMarmara uye Kocaeli Metropolitan Municipality Assoc. Dr. Tahir Büyükakın akaongorora mabasa ekuvaka eGebze-Darıca Metro Line, akaendeswa kune Ministry ofezvekutakurwa uye Zvivakwa, 52 metres pazasi pevhu. Nheyo yeKocaeli [More ...]
Ku-Band Mhepo Satellite Kutaurirana System, iyo yakatangwa kuzadzisa kunze-kweye-yekuona-kwekukurukurirana zvinodiwa zveTurkey Armed Forces ndege uye yakagadzirwa mukati mechinzvimbo cheicho chega-chakagadzirirwa cheR & D chirongwa, [More ...]
Rakatsikisa Chirevo pa 'Matanho Ekuvhurwa kweIstanbul'
IMM Sayenzi Yekuzivisa Advisory Board yakaparura mushumo we 'Matanho Ekuvhurwa kweIstanbul'. Mumushumo; Turkey ndeyekudzikisa kwehuwandu hwekufa kuwanda; zvisinei, zvakataurwa kuti hapana data hutano maererano neIstanbul. Normalization mumushumo [More ...]
Muhurukuro yake kuKIPT Silivri 3rd Stage Kura Lottery Ceremony, PresidentBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu vakadaidzira runhare runotevera kuna General Manager Ali Kurt: "Muno muchaunza dzimwe dzedzimba dzatinokwevera. Tasvika ipapo [More ...]
Mushure mekutungamirwa kwechiratidziro, kuburitswa muyakagadziriswa yakawanda kunoenderera munaMay zvakare, mushure mekutungamirwa kwechirongwa mukati meiyo chiyero cheMine Resistant Pararti Protenti Muponesi (MKKKK) chirongwa chakagadziriswa neMPG Makine Production Group. MPG Mashini Kugadzirwa [More ...]
Ongororo yakavambwa yekuona mhedzisiro yehurombo hwekuita nezvekutakura maitiro uye Istanbul traffic. Chidzidzo ichi chinoshandiswawo kuona mutsva maitiro uye kuongorora maitiro evapfuura mushure mekuputika. Istanbul Commerce University Yezvekufambisa Systems [More ...]
Mune chirevo chakaitwa neBMC Board nhengo Taha Yasin Öztürk, iyo yekupedzisira shanduro yeBMC Tulga yakaratidzwa. Taha Yasin Öztürk akati, "Nenzira yakaoma iyi, takagadzira, tichifunga zvinodiwa nevashandi vedu vekuchengetedza mukati. [More ...]
Kadıköy-2 (Nyowani) Ferry Port iri kuvandudzwa kubva kumusoro kusvika kuzasi. Ichitaura kuti ivo vanoda kushandisa ma piers senzvimbo yekugara uye yechiitiko, Guta mitsara AŞ General Manager Sinem Dedetaş zvakare ichatanga kuvandudza mabasa kune mamwe ma piers. [More ...]
Covidien-19 matanho ese anotorwa mukati mechikamu cheTurkey nekuda kwedenda, kubva kuna Eve kuenda kumigwagwa kwemazuva mana uye anogara kuRamadan kumba. Istanbulites ine nguva yekudzidzira ichaiswa pakati pe 4-23 Chivabvu [More ...]
Iyo 'Network Inobatsira Talent' purojekiti, yakagadziriswa neASELSAN, yakaratidza kitsi yayo kubva kuNATO's EURASIAN STAR'19 kurovedza. EURASIAN STAR (EAST) 2019 Exercise, 3rd Corps Command, Nineteen muIstanbul ine NATO Command uye Force Stosition [More ...]
Mutambo Chipo kune Vagari Vapfuura Makore makumi matanhatu Makore kubva Izmir Metropolitan
Izmir Metropolitan Municipality yakarongedza mutambo wekupemberera kuti upe morale pamberi pemutambo weRamadan. Mapakeji anozogoverwa kune gumi kuzviuru zveIzmir vagari vanopfuura makore makumi matanhatu. Makore makumi matanhatu ekugara zororo rakaparadzaniswa kubva kune vadiwa nekuda kwekudzoka kumba [More ...]
Turkey kwakaita unmanned zvemuchadenga motokari kurwisa rokutanga kuti Bayraktar AKINCI tiha kukura danho yakawanda kuratidza "AKINCI" Documentary May 24, 2020 Svondo zuva, zuva Ramadan, imi Baykara wokutanga maawa 20.23:XNUMXTube [More ...]
Karsan, kuitira kuti iwedzere kushanda kwayo mumusika webhazi yemagetsi, Bozankaya Ese kodzero rekodhi yakagadziridzwa nemotokari mabhazi nemagetsi mabhazi anogara akapatsanurisa trademark kodzero ndezvemuridzi, iyo inonyoreswa muTurkey uye mumusika wepasi rose uye [More ...]
Iyo Sainzi uye Technological Research Council yeTurkey (TUBITAK) mukati mevanhu gumi neshanu vachashanda. Sekureva kwakaita chiziviso muGovernment Gazette, vashandi gumi nevaviri veR & D kuti vashande mukati me Space Technologies Research Institute (UZAY), [More ...]
NaCeylanpınar Kudiridza Chekudyara, Zviuru zvemaEparesheni Achawana Mvura
Gurukota rezvekurima uye Masango Bekir Pakistani Minister Pakdemirli [More ...]
Zuva reArife muIzmir uye Chirongwa chekufambisa kwePasirese paMutambo
Nguva yekudzoka ichaiswa manheru emusi weRamadan neMutambo weRamadan. Muchirongwa ichifukidza 23-26 Chivabvu; Mabhazi eESHOT, Metro uye TCDD-İzmir anopa rubatsiro rwekufambisa neveruzhinji kumapoka ehunyanzvi uye evashandi veruzhinji. [More ...]
Tsananguro kubva kuMSB! Subpoena uye Kutumira Kwekutakurwa kuchaziviswa kubva ku-e-Hurumende musi wa 28 Chivabvu
Ruzivo rwenhau rwakapihwa pamusoro pematanho anotorwa, zviitiko zvinoramba zvichiitika uye nyaya padanho reInternational Defense National, kunyanya kurwisa ugandanga, kurwisa denda reCOVID19. Mune ruzivo rwakagadzirirwa nenzira yevhidhiyo nekuda kweCCIDID-19 kubuda [More ...]